नेपाली फिल्ममा सन्नीको ८ करोड डान्स | रंग खबर
नेपाली फिल्ममा सन्नीको ८ करोड डान्स
रंगखबर, काठमाडौँ – बलिउड आइटम गर्ल सन्नी लियोनले नेपाली फिल्म ‘पासवर्ड’को एक गीतमा नृत्य पस्केकी छन् । निर्माण पक्षले बताए अनुसार उक्त गीतका लागि नेपाली ८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
सन्नीको पारिश्रमिक २ करोड भारतीय र गीत छायाँकन गर्दा सकिएको ५ करोड नेपाली जोड्दा ८ करोड सकिएको छ । वर्तमानमा नेपाली फिल्मले ८ करोड कमाउन हम्मे पर्छ । एकाध फिल्म मात्र छन् । जसले ८ करोड माथि कमाइ गरेका छन् ।
तर, फिल्मको एकै गीतमा ८ करोड खर्चिएपछि बजेट कहाँसम्म पुग्ला । कम्तिमा १० करोड । निर्माण पक्षले कथाको मागअनुसार नै सन्नीलाई झिकाइएको बताएको छ । जे होस् ‘पासवर्ड’ सर्वाधिक महँगो नेपाली फिल्म बन्नेछ ।
सन्नी फिचर्ड गीतका केहि तस्विरहरु सार्वजनिक भएका छन् । जुन गीतको कोरियोग्राफीका लागि बलिउडका चर्चित कोरियोग्राफर विष्णु देवालाई झिकाइएको छ । अर्जुन पोखरेलको संगीत रहेको गीतमा २ सय बढी कोरस प्रयोग गरिएको बताइएको छ ।
सम्राट बस्नेतले निर्देशन गरेको फिल्मलाई बिक्रम जोशी, हिरल जोशी र अमित बस्नेतले निर्माण गरेका हुन् । फिल्ममा बिक्रम जोशी, अनुपबिक्रम शाही, बुद्दि तमाङ, छुल्ठिम गुरुङ, विक्रान्त बस्नेत, रविन्द्र झा, प्रविण खतिवडा, लिशा सुनार, परि रानालगायतको अभिनय छ ।
अङ्कुराउदै साया र अतितको प्रेम
रवि लामिछाने र निकिताले गरे कानुनि विवाह
आयुषमानको सम्झनामा प्रियंका
100 kada 10
डा. डीआरका एकै पटक ७ एल्बम विमोचन
रंगखबर, काठमाडौँ – नेपाली साहित्य परिषद गान्तोकमा डा. डीआर उपाध्यायले आफ्ना ७ एल्बम एकै पटक..
रंगखबर, काठमाडौँ – फिल्म ‘समर लभ’ चर्चित साहित्यकार सुबिन भट्टराईको लोकप्रिय उपन्यास ‘समर लभ’मा आधारित..
यी सुपरस्टारको पहिलो तलबले पार्नेछ तपाईलाई छक्क !
रंगखबर, काठमाडौँ। बलिउड कलाकारहरुले अहिले फिल्म, विभिन्न कार्यक्रम र इन्डोर्समेन्टको माध्यमबाट करोडौं रुपैयाँ कमाउँछन्। तर..
विक्कीको ‘उरी’ले १० दिनमै कमायो सय करोड
रंगखबर, काठमाडौँ – बलिउड फिल्म ‘उरी: द सर्जिकल स्टाइक’ले घरेलु बक्सअफिस अचम्मको व्यापार गरिरहेको छ..
रंगखबर, काठमाडौँ – चलचित्र बिकास बोर्ड अध्यक्ष निकिता पौडेल र पत्रकार रवि लामिछानेले कानुनी विवाह..
वैवाहिक सम्बन्ध बचाउन नसकेका ५ अभिनेत्रीहरु
बलिउडका ४ धोकेवाज प्रेमी
जाडो भुलाईदिने अदितिका हट ८ तस्बिरहरु
गुण्डा नाइके दीपक मनाङ्गे फिल्म निर्माणमा, निर्देशकमा शिशिर राणा
सोनमले खोलिन अर्जुन-मलाइकाको सम्बन्ध मन नपराउनुको रहस्य
विवाह पछि किन घर ज्वाई बने रणवीर ?